သားဖြစ်သူနှင့် ဟေလီဘော်လ်ဒွင်တို့၏ စေ့စပ်ထားမှုအား ဂျက်စတင်ဘီဘာ အမေ သဘောမတူဟု သတင်းများ ထွ? - Yangon Media Group
သားဖြစ်သူနှင့် ဟေလီဘော်လ်ဒွင်တို့၏ စေ့စပ်ထားမှုအား ဂျက်စတင်ဘီဘာ အမေ သဘောမတူဟု သတင်းများ ထွ?
ဟောလိဝုဒ်၊ ဇူလိုင် ၂၅
သားဖြစ်သူ ဂျက်စတင်ဘီဘာ၏ ဟေလီဘော်လ်ဒွင်နှင့် စေ့စပ်ထားမှုအား မိခင်ဖြစ်သူ ပတ်တီမလ်လက်အနေဖြင့်ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကောလာဟလများ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထွက်ပေါ်လာ နေကြောင်း သိရသည်။
” Sorry”အဆိုရှင် ဂျက်စတင်ဘီဘာသည် ယခုလအစောပိုင်း၌ ဟေလီနှင့် ဘဟားမားကမ်း ခြေအပျော်ခရီးတွင် ဒူးထောက်ကာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဂျက်စတင်၏ သိမ်းငှက်မျက်လုံးများကဲ့သို့ စူးရှထက်မြက်သည့်မျက်လုံးများ ပိုင်ဆိုင်သော ပရိသတ်များကတော့ ၎င်းနှင့်ဟေလီတို့အပေါ် မိခင်ဖြစ်သူပတ်တီ၏အမြင်အပေါ် စတင်ကာ သံသယရှိလာကြပြီဖြစ်သည်။
Twitter ၏ ပတ်တီ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနေရာ၌ ”ဟုတ်ပါတယ်။ ဂျက်စတင်ဘီဘာက ကျွန်မသားပါ”ဟူသောစာသားအား အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသော်လည်း သားဖြစ်သူ၏စေ့စပ်သတင်းကြေညာခဲ့ပြီး နာရီအနည်းငယ်အတွင်း အဆိုပါစာသားအား တွေ့ရခြင်းမရှိတော့ပေ။ ထိုအခါ ပရိသတ်များက Twitter တွင် ပတ်တီအား ဂျက်စတင်နှင့် ဟေလီတို့ အား သဘောတူရဲ့လားဟုမေးမြန်းရာတွင် ၎င်းက ”ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောစရာ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့”ဟူ၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရေးသားခဲ့သည်။
အလောတကြီးစေ့စပ်သည့် ကျပန်း Posts များအား သူမလိုက်လံကာ Like များပေးခဲ့ပြီးနောက်တွင်တော့ ပရိသတ်များအတွက် ပိုမိုကြီးထွားစေခဲ့သည်။ သူမ Like လုပ်ခဲ့သော Posts များတွင် ဂျက်စတင်နှင့် ဟေလီတို့နှင့်ဆိုင်သော Posts တစ်စုံတစ်ရာမျှ ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။